ဘယ်သူဘာရေးမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ဘယ်သူဘာရေးမလဲ	14
Posted by YE YINT HLAING on Jul 13, 2015 in My Dear Diary | 14 comments
ဖတ်လို့ ရ တဲ့ နေရာ ရောက်တိုင်း အမြဲတမ်း ရတဲ့ အချိန်လေး မှာ ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။
View all posts by YE YINT HLAING →	Blog
မြစပဲရိုး says: Thanks.
It is very encouraging. :-)))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ကို ရေး ပြိး ပိုစ်တင် ထား တဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလဲ
ဘယ်သူတွေဖတ်ပြီး ဘာပြော မလဲ
Ma Ma says: ဖတ်လို့ရတဲ့နေရာရောက်လို့ ၀င်ဖတ်တယ်ဆို တာဝန်ကျေပါတယ်။ အဲ…. ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်လေးများ ရေးပေးမယ်ဆို ကျေးဇူးတင်မိမှာ။
စာရေးတဲ့သူတွေမှာလည်း ကွန်မန့်လေးမျှော်ပြီး အားတင်းနေကြရတာကလားးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးကျေးပါ။
ရွာ ရဲ့ စာဖတ်သူ စစ်စစ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
ကိုရဲရင့်လှိုင် ခါတလေ ဝင်ပြောတဲ့ ကော်မန့်တွေ အရ ရွာကို မျက်ခြေမပြတ်သူမှန်းသိသာပါတယ်။
ပို့(စ) တွေ ဆက်ရေးပါဦးးး
ဦးကြောင်ကြီး says: နီက နန္ဒာလှိုင်နဲ့ ဘာတော်သရဲ…
Mike says: .ရွာသားတစ်ယောက်ရွာကိုဝင်ဝင်ချောင်းနေကြောင်းအသိလာပေးတာပေါ့…ကောင်းပါလေ့
.ပို့တင်လို့တောင်ရနေတာပဲ..စာရေးပါအုံးလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: ဖတ်သွား မန့်ပေးသွားကြတဲ့ အတွက် အားလုးံ ကို
မွသဲ ( 17082011 ) says: အင်းဘာပြောရမယ်မသိလို့ ပြောတော့ဘူးလို့ ဟိဟိ
YE YINT HLAING says: အင်း အဲဒါလည်းကောင်းပါတယ် ခိခိ
ဦးကြောင်ကြီး says: တဖက်ပိတ် မဲသွပ်က ဘာမြှား မိန့်ဒေါ်မူခြင်ပါသလဲ ခမြ.. ပလို့ဂျိ
aye.kk says: ကျေးကျေးပါ။။
YE YINT HLAING says: တီတီအေး ကိုလည်း ကျေးကျေးပါ။
zarlay says: တို့ဘာမှမရေးဘူးနော်
YE YINT HLAING says: တို့လည်းဘာမှမရေးပါဘူးနော့